कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार २८ गते आइतबारको रा’शिफल ! – Sanchar Patrika
July 12, 2020 269
वि.सं.२०७७ असार -२८, आइतवार,ई.सं.२०२० July -१२,शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० दिल्लागा,प्रमादी,उत्तरायण,ग्रीष्म,श्रावण कृष्णपक्ष तिथि-सप्तमी , १४:५२ बजे उप्रान्त अष्टमी,नक्षत्र-उत्तरभाद्रपदा , ०८:२६ बजे उप्रान्त रेवती,योग-अतिगण्ड , २२:३९ बजे उप्रान्त सुकर्मा,करण ,वव १४:५२ बजेदेखि वालव , २७:५२ बजे उप्रान्त तैतिल,चन्द्रराशि-मीन,आनन्दादि योग-स्थिर, सूर्योदय-५:१८, सूर्यास्त-१९:००,दिनमान-३४ घडी १७ पला,पञ्चक। व्रत/पर्व-रवि सप्तमी व्रत, अष्टमी व्रत।
माया प्रेममा एक अर्कालाई शं’काको दृष्टिले हेर्दा अबिश्वास बढ्नेछ भने घर परिवार तथा आफन्तजन सँग राय बाजिनेछ । आर्थिक अभावमा बिभिन्न अवसरहरु गुम्नेछन् भने व्यापार व्यावसायमा समय लगानि गरेपनि आम्दानि कमनै हुनेछ । बिद्यामा सफलता पाउन निकै नै संघर्ष गर्नु पर्नेछ । मान्यजनहरुको सुझाबलाई हुँबहु लागु गरेर अगाडि बढे केहि मात्रामा लाभ हुनेछ।
समाजमा राम्रा काम गर्न सकिने हुनाले उचाई बढ्नेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानि गरि मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने आकश्मिक लाभ तथा आभुषण प्राप्तीको गतिलो योग रहेकोछ । तपाईको कार्यकुसलताको सबैले तारिफ गर्नेछन् । कुटु’म्ब तथा आफन्तबाट धन तथा सम्पति लाभ हुने ग्रहयोग रहेकोछ । मेलमिलाप तथा भाईचाराको सम्बन्ध स्थापनमा तपाईको भुमिका महत्वपुर्ण हुनेछ।
भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको कारोबार गर्दा वा प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्ययम रहेकोछ । अन्य क्षेत्र मध्ययम रहेपनि बैक तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानि सुरक्षित हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा मन जाने हुनाले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ । आटेको काम तत्काल नहुने योग रहेको भएपनि पछिको लागि जग बसाउने मौका मिल्नेछ । आफन्त तथा घरका मानिससँग सामान्य कुारामा राय बाजिने वा बिवाद हुने योग रहेकोछ।
प्रेम गर्ने जोडिहरुका लामो समय सँगै बसेर भलाकुसारि गर्न सक्नेछन् । महिला मित्रहरुसँग गरिने कुनै पनि व्यापार तथा आर्थिक ब्याबस्थापनका लागि गरिने कारोबारहरु फस्टाएर जानेछन् । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा अरुलाई पछाडि पारिनेछ भने साथिभाई तथा आफन्तबाट उत्साहजनक सहयोग प्राप्त हुनेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला।
मामा तथा मावली पक्षबाट तपाईको काममा भरपुर सहयोग पाईने योग रहेकोछ । माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ भने पति पत्निबिच मायाको डोरो कसिनेछ । तपाईको कुभलो साध्ने तथा सत्रुता राख्नेहरु आफै किनारा लाग्नेछन् । न्यायिक निकायबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । पुराना तथा थाति रहेका कामहरु साथिभाईहरुको सहयोगमा समयमानै सकाउँन सकिनेछ भने लेनदेनका मु’द्दाहरु सल्टाउँन सकिनेछ।
Next‘काठमाडौंमा स’ङ्क्रमण भुसमा आ’गो हुन सक्छ; वृद्धहरूलाई जोगाउनै गा’ह्रो’
पाकेको धान डुबेपछि किसान चिन्तित
नेपाल आइडल-३ को फाइनल शुरु, को होला विजेता ? (हेर्नुहोस् लाइभ भिडियो)
रियाले सुशान्तको खाताबाट १५ करोड आफ्नो र भाइको खातामा पठाएकी थिइन् ? खुल्यो यस्तो रहस्य
यी ४ काम, जुन धेरै बेरसम्म गर्नै हुँदैन